HomeTURKEYTurkish Aegean35 Izmir
Wareegtada tareenada iyo jidadka wadooyinka
Izmir IZBAN, Metro iyo Tram Map:
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir ayaa riixday badhanka Bandhigga Caalamiga ah ee 89-aad ee Izmir, kaas oo sanadkan lagu qaban doono mowduuca "Badda Dhexe". Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer, maantana, wuxuu la kulmayaa qunsulka sharafta leh ee 8 wadan oo kuyaalla badda Mediterranean ee Izmir [More ...]
Basaska İZTAŞIT waxay qaadeen 113 rakaab ah khadka Seferihisar, halkaas oo dalabka laga bilaabay labadii toddobaad ee ugu horreeyay. Dhowr horumar ayaa la sameeyay si loo wanaajiyo tayada safarka. Wada shaqeynta gaadiidka degmada İzmir Caasimadaha Magaalada deriska ah si wada jir ah [More ...]
Qaanuunka Dib-u-dhiska Izmir ee qabyada ah waxaa si wada jir ah u ansixiyay Golaha Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir. Kulankii Golaha Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir xalay, waxay si wada jir ah u meel mariyeen Qaanuunka Qabyoqoraalka oo loo diyaariyey qaab ka qaybqaadasho ah. [More ...]
Duulimaadyada habeenkii ee loo yaqaan "owk" ayaa ka faa'iiday 80 rakaab ah siddeed bilood gudahood. Metro iyo wadada laamiga ayaa qaada 2019 milyan oo rakaab ah sanadka 140 magaalada İzmir. İzmir Metro iyo taraam 6 hal sano gudaheed [More ...]
Duqa magaalada Cigli Utku Gumrukcu, Jaamacadda Izmir Katip Celebi intii lagu gudajiray imtixaannadii ugu dambeeyay si ardayda looga taageero inay la kulmaan baahida loo qabo gaadiid iyo qaybinta maraqa kulul ee la faray. Duqa magaalada Cigli Utku Gumrukcu, [More ...]
Diyaargarowga Shirweynaha ENGELSİZMİR 2020 ee horumarka
Diyaargarowga Shirweynaha ENGELSİZMİR 2020 Koongarashu way socdaan. Iyada oo laga duulayo qaban-qaabada shirweynaha, bug Gardenn Therapy Therapy iyo Aqoon-isweydaarsiga Dowladaha Hoose ayaa la qabtay maanta. Si kor loogu qaado wacyiga shakhsiyaadka qaba baahiyaha gaarka ah ee degmada polzmir Dawlada Hoose iyo in la hubiyo marin u helkooda adeegyada bulshada. [More ...]